Ireo fanontaniana tsy apetraka momba an'i Ello | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 29, 2014 Alatsinainy, Septambra 29, 2014 Douglas Karr
Azoko antoka fa misy mametraka ireto fanontaniana ireto, saingy halaiko foana izany satria tsy hitako. Nanatevin-daharana aho izany aloha be - misaotra ny namako sy ny mpidoroka amin'ny teknolojia marketing, Kevin Mullett.
Avy hatrany, tao anatin'ny tambajotra kely dia nandehandeha aho ary nahita olona mahatalanjona izay mbola tsy nifankahitako. Nanomboka nizara sy niteny izahay… ary tena nahagaga. Nisy aza naneho hevitra fa manana an'io i Ello fofona tambajotra vaovao. Nandritra ny faran'ny herinandro dia nandany fotoana betsaka kokoa noho ny tao amin'ny Facebook aho… ny ankamaroany mijery sary sy mahita olona.
Fa maninona no ilaintsika i Ello?
Ny resabe manodidina an'i Ello sy ny fitomboana lehibe dia milaza zavatra iray amiko: Tsy faly amin'ny tambajotra ananantsika izahay. Ny olona sasany dia mifantoka amin'ny tsy fananan'i Ello fananganana marobe, ny hafa kosa mifantoka amin'ny fisehoana. Samy tsy mahita ny heviny izy roa. Tsy momba ny fananganana na ny fiasa no resahina, fa ny fanamafisana ny serasera sy ny fifandraisana tsara eo amin'ny samy olombelona.
Ello ve no valiny?
Tsia, tsy araka ny hevitro. Fantatro fa i Ello dia beta saingy efa mazava amin'izy ireo ny fahitan'izy ireo manoratra manifesto:
Tompon'ny tambajotra sosialy ny tambajotra sosialinao. Ny lahatsoratra rehetra zarainao, ny namanao rehetra ataonao ary ny rohy rehetra arahinao dia arahana, voarakitra ary navadika ho data. Ny mpanao dokam-barotra dia mividy ny angon-drakitrao mba hahafahan'izy ireo mampiseho doka bebe kokoa aminao. Ianao no vokatra novidina sy amidy.
Tsy manambara an'io izany, fa izaho kosa hanao teny hafa indray ary milaza fa mino i Ello fa ny fifamatorana amin'ny dolara orinasa dia fivarotana, fa ny orinasa no fahavalo.
Diso hevitra izy ireo. Ny olombelona dia manana fifandraisana amin'ny orinasa, vokatra ary serivisy isan'andro - ary ny ankamaroantsika dia mankasitraka ireo fifandraisana ireo. Ireo fahavaloko izay manangana ny vokatra novidiako dia tsy fahavaloko, tiako ho sakaizako izy ireo… ary tiako hohalalinina ny fifandraisako amin'izy ireo.
Tiako izy ireo hihaino ahy, hamaly ahy, ary hifandray amiko manokana rehefa fantany fa liana aho.
Tsy mahomby eo amintsika ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy
Tamin'ny andro voalohan'ny Facebook, navela hanangana pejy ireo orinasa hananganana ny fiarahamonin'izy ireo ary hiteraka fifandraisana mihoatra ny olona miaraka amin'ireo marika ankafizin'izy ireo. Izany ny fampanantenan'ny marketing amin'ny media sosialy - fa tsy mila manosika dokam-barotra eo imason'ny rehetra isika ary manery azy ireo hamaky fantsom-piatoana hanandrana hamoaka varotra vitsivitsy. Ny orinasa sy ny mpanjifa dia afaka mifampiresaka amin'ny fifandraisana tsara sy mifototra amin'ny alalana.
Nanangana ny vondrom-piarahamoninay izahay ary nifandray… ary avy eo dia nesorin'ny Facebook ny rug avy tao ambaninay. Nanomboka nanafina ny fanavaozana ny pejinay izy ireo. Noteren'izy ireo izahay izao hanao doka amin'ny olona tena nangataka firotsahana!
Ny dokam-barotra amin'ny media sosialy dia ny fenitry ny marketing tsy misy dikany - tsy niova hatramin'ny fizarana mailaka voalohany voalohany, ny doka an-gazety voalohany, na ny doka fikarohana voalohany dia nanintona ny sainay tsy hijery ny atiny tianay. Fahombiazana ny fanaovana dokambarotra amin'ny haino aman-jery sosialy.
Samy hafa ve i Ello?
Roa andro nampiasana an'i Ello dia narahiko aho @ausdom. Mahaliana ahy izay olona manara-dia ahy ka nanindry aho avy eo ary nimonomonona avy hatrany. Ausdom dia sary famantarana ary manosika ny vokatr'izy ireo ny fanavaozana azy ireo. Ugh… ny SPAM voalohany dia namely an'i Ello. Misalasala aho fa ny Ausdom no marika voalohany ao, fa izy ireo no voalohany nanara-dia ahy ka azon'izy ireo ny anarana.
Ny vinavinako dia ny Ello izao dia ho tototry ny kaonty marika (mitovy amin'ny Twitter), tsy misy fanavahana na fetrany. IZAO no olana ry namako. Na dia te-hamorona fifandraisana amin'ny marika aza izahay dia tsy tianay izy ireo hampihemotra ny tendantsika. Tsy ny fividianana sy fivarotana angona angaha no manelingelina ahy amin'ny media sosialy (na dia mampatahotra ahy aza ny fidiran'ny governemanta ao aminy), ny fahavetavetana amin'ny marketing ara-tsosialy mahantra no mahamenatra ahy. Ello dia ho tototry tsy ho ela ary ho ringana raha tsy ataon'izy ireo voalohany momba ny olona izany ary misy ireo marika.
Ny tambajotra sosialy ilainay!
Faly aho manome misy marika ny data-ko raha mbola omeko azy ireo izany ho takalon'ny traikefa momba ny mpampiasa sy ny marketing tsara kokoa. Tsy mila mividy izany izy ireo. Tsy tiako ny orinasa iray vao afaka misoratra anarana amin'ny lampihazo ary manomboka miresaka amiko. Tiako izy ireo hiandry an-tsitrapo mandra-pahatongako ny fihetsika voalohany.
Tsy i Ello no valiny ary tsy ho valiny raha tsaraina amin'ny fanehoana an-dry zareo. Saingy tsy misy isalasalana fa noana fiovana isika! Mila zavatra hafa ankoatry ny Twitter, Facebook, LinkedIn ary Google+. Izahay dia mila tamba-jotra izay misy famerana mametraka ny mpanjifa miandraikitra ary ampio ny mpivarotra manangana fifandraisana haja amin'ny lead, prospect, ary ny mpanjifa.
Hamatsy vola ity karazana tambajotra ity ny orinasa. Mandoa vola an'arivony dolara ny orinasa amin'ny fitaovana hanaraha-maso sy hamaly ny resadresaka amin'ny haino aman-jery sosialy, azo antoka fa handoa saram-pisoratana anarana amin'ny tambajotra manome interface maimaimpoana ho an'ny mpanjifa izy ireo nefa ahafahana mamorona sy mitombo ny fifandraisana mifototra amin'ny alalana. PS: Indray mandeha aho dia nanangana vokatra toy izao tamina incubator ary efa voaampita. Maniry aho fa hanana famatsiam-bola hananganana azy!
Alefaso amiko ny fanasana raha nahita an'io tambajotra io ianao!
Tags: ausdomelloello manifestodoka ara-tsosialyhaino aman-jery sosialydoka amin'ny media sosialyfampahalalam-baovao sosialySocial Media MarketingTambazotram-pifandraisanaamin'ny spam
Sep 29, 2014 amin'ny 11: 11 AM
Sep 29, 2014 amin'ny 11: 27 AM
Raha tsy ovaina dia toa clone “twitter pay” ihany izany.
Sep 29, 2014 ao amin'ny 2: PM PM
Hafahafa tokoa. Tsy fantatro hoe aiza no hametrahana ny hevitra momba an'ity. Ity ny porofo fa ao amin'ny Ello ianao: https://ello.co/douglaskarr/post/-mvhqyaB9IYOQ2PwFAu6hA
Oct 6, 2014 amin'ny 9: 29 AM
Fantatro fa antitra aho satria manantena mangingina aho fa ho tonga amin'ny fotoana hahatsapan'izy ireo fa afaka manana atiny tsara lavitra kokoa ny olona raha toa ka vonona ny handoa zavatra iray izy ireo.
Oct 6, 2014 amin'ny 10: 02 AM
Tonga eo aminao aho!